San Htun's Diary: March 2011
Dining Hallထဲ အစာ:အသောက် ယူတဲ.နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ဆေ:တယ်.နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဆုံမိရင် MUM Feb intake MSCS က ကျောင်းသား၄၈ယောက်ဟာ ၅ယောက်ပဲရှိရှာတယ်. တို.များကျောင်းသူတွေကို "Lady First"လို့ မပြောသော်ငြား ခေါင်းကလေး ငဲ.၊ လက်ကလေးပြပြီ: ဦးစားပေးပါတယ်။
SCI courseပြီ: Presentation ပြီ:တယ်.အခါ နေ့လည်စာ စားပြီ:တယ်.အခါ ရေခဲမှုန့် ကျွေးပါတယ်။ မစားရတာ ၁လကြာပြီ ဖြစ်တယ်. ရေခဲမှုန့် စားဖို. သွားတယ်.အခါ ရေခဲမှုန့်နား ယောက်ျားလေးများ အုန်းအုန်းထနေပါတယ်။သူတို.နဲ. အတူဝင်မတိုးနိုင်လို့ အနားမှာ အသာလေးရပ်ပြီ: "Lady first" လို့ ပြောလိုက်တယ်. သကာလ ပါကစ္စတန်နဲ. အီဂျစ်က ကောင်လေးများက Lady မ first ပါဘူးတဲ.။ Men and women are equal ပါတဲ.။ First come,first serve တဲ.။ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘဲ အသာလေး ငြိမ်ကုပ်ပြီ: ပြန်ခဲ.ရတယ်။ လူနည်:နည်: စဲတော.မှ ရှိတယ်. မိန်:ကလေးအုပ်စု ချီတက်သွားတော.မှပဲ စားရတော.တယ်။
Wal Mart သွားဖို့ Shuttleစောင်.တုန်းကလည်: မိန်:ကလေးမို့ ဦးစားပေးမယ် မထင်နဲ. လှည်.တောင် မကြည့်ဘူး။ သူတို.နဲ. ပြိုင်တို:ဖို. နေနေသာသာ အနားတောင် မကပ်နိုင်ဘူး ။ နောက်တစီးကို ၁၅ မိနစ်လောက် အအေးထဲမှာ စောင်.ပေတော.ပဲ။ အေးလွန်:လို့ နာရည်တွေ ကျလာတာ ပြန်ရောက်တော. Cevit သောက်ယူရတယ်။ အဲဒီကတည်:က စလို့ MUM MSCSက Gentleman များဟာ Dinning Hallထဲမှာသာ Gentleman ပါတယ်။ Lady first ကလည်: Dinning Hall မှာသာ lady first တာ တခြားနေရာမှာ lady မ firstပါဘူးလို့ တို.များကလည်: အတင်းတုတ်ပါတယ်။
ယောက်ျား၊ မိန်:မ ၂ယောက်လုံး အလုပ်လုပ်မှ စားရတယ်. ခေတ်ကြီ:ထဲမှာ မိန်:မက အလုပ်က ပြန်လာရင် ချက်ပြုတ်ပြီ: အလုပ်များနေသလောက် ယောကျာ်းဖြစ်သူကတော. အိမ်မှုကိစ္စ ငါနဲ. မဆိုင်ဆိုပြီ: နေတယ်.သူမျိုး ရှိသလို မိန်:မကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတယ်. သူမျိုးလည်: ရှိပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတယ်. ယောက်ျားကိုရတယ်. မိန်:မဟာ တကယ် ကံကောင်းတာပဲ။ အိမ်မှုကိစ္စ ငါနဲ. မဆိုင်ဆိုပြီ: နပ်နေတတ် တယ်. ယောကျာ်းလေးများကို မြင်ရ၊ကြားရတယ်. အခါ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် "Yes. Men and women are equal. But men are more equal." လို့ ။
Singapore မှာနေတော. ရန်ကုန်ကို လွမ်:တယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတော. Singaporeကို လွမ်:တယ်။
Singaporeရော၊ရန်ကုန်မှာရော မနေတယ်.အခါ Singaporeရော၊ရန်ကုန်ရော ၂ခုလုံးကို လွမ်:တယ်။
တယောက်တည်: စကားပြောဖော် မရှိဘဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ငေးကြည်.ရတိုင်း၊ စားမဝင်တိုင်း၊ ရာသီဥတု အေးလွန်:တိုင်း၊ရင်ဖွင့်ရမယ်. သူငယ်ချင်း မရှိတိုင်း၊ ဘယ်မှ သွားလည်စရာ မရှိ ဂူအောင်းနေရတိုင်း၊မိသားစုနဲ. မိုင်သောင်းချီဝေးတယ်. ဟိုးအဝေးကြီ:မှာလို့ ခံစားရတိုင်း၊မြန်မာစကားကို လွမ်:မိတိုင်း တယောက်တည်:ပါလား ခံစားချက်က ဝမ်:နည်:စေတယ်။
မျှော်လင့်ချက်တခုအတွက် ပေးဆပ်ရတယ်. တန်ဖိုးက ကြီ:မားတယ်။
အရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ. အရွက်မရှိတယ်. သစ်ပင်တွေကို မြင်ရတိုင်း အမြဲစိမ်:စိုနေတယ်. သစ်ပင်တွေကို လွမ်:တယ်။
အေးစက်တယ်. နှင်းတွေ မြင်တိုင်း ပူနွေးတယ်. နေရောင်ခြည်ကို လွမ်:တယ်။
ပေါ့ရွှတ်တယ်. အစားအစာတွေ စားရတိုင်း အရသာရှိလှတယ်. ကိုယ်.တိုင်ပြည်အစားအစာကို လွမ်:တယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ စီးရတိုင်း mrt နဲ.bus ကို လွမ်:တယ်။
ကိုယ်.ဘေးနား လူအများကြီ:ရှိပေမယ်.လည်: တယောက်တည်:လို့ ခံစားရတယ်. အခါ မိသားစုကို လွမ်:တယ်။
အမြဲ ဗိုက်ဆာနေတယ်.အခါ အမြဲတမ်:ဗိုက်ပြည်.နေတာကို လွမ်:တယ်။
SMS,PhoneCall,Gathering,Shopping ကို လွမ်:တယ်။
မျက်လုံးပြာတွေ ကြားထဲမှာ စပ်စုတတ်တယ်. မျက်လုံးနက်နက်တွေကို လွမ်:တယ်။
အဲ နောက်ထပ် ဘာများ လွမ်းစရာ ကျန်ပါသေးပါလိမ်....:P